E-Journal: June 2008
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 1:15 AM5comments
သြော်. . . လူ့ ဘ၀တဲ့
ရောက်ခဲ့ ၊ လျှောက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း
သြော် . . . ဆင်းရဲလိုက်တဲ့ ဘ၀တွေ
အချစ်၊ မေတ္တာ၊ ငွေနဲ့ အကြင်နာ
ဟာ . . . မဲ့နေ ၊ဆင်းရဲနေကြတဲ့ လောက
နေ့တွေ ၊လတွေ ရေတွက်ရင်း
မောလျှစွာနဲ့ . . . . လူ့ဘ၀က ပြန်ထွက် ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 10:11 PM7comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 8:45 PM 8 comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 6:00 PM2comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 4:40 PM3comments
မင်းရောက်ခဲ့ပြီ … ချစ်သူ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 9:16 PM5comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 10:43 PM2comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက အိမ်လွမ်းသူ(မှန်နီကုန်း) at 11:48 PM3comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 10:37 PM4comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 6:09 PM3comments
ကမ္ဘာ့ဆွဲအားနိယာမ ရှိသလို နိယာမတွေရှိတဲ့ စကြ၀ဠာမှာ ကျွန်တော်တို့ နေကြတာပါ။ တကယ်လို့ ခင်များဟာ အဆောက်အအုံတစ်ခုကနေ ပြုတ်ကျတယ်ဆိုရင် ခင်များဟာ လူကောင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လူဆိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြေကြီးနဲ့ ရိုက်မိမှာပါပဲ။
ဆွဲဆောင်မှုနိယာမ ဆိုတာ သဘာဝရဲ့နိယာမတစ်ခုပါပဲ။
ခင်များပြစ်တင်ဝေဖန်နေတဲ့ အရာတွေအပါအ၀င် အခုခဏ ခင်များဘေးမှာ ရှိရှိသမျှ အဖြစ်အပျက်အခြင်းအရာအားလုံးဟာ ခင်များ ဆွဲဆောင်ထားတဲ့ အရာတွေချည်းပါပဲ။ ခင်များကတော့ နားခါးမှာ အသေအချာပါပဲ။ “ယာဉ်မတော်တဆထိခိုက်မှုလိုဟာမျိုး ငါက ဆွဲဆောင်တယ်ပဲ ရှိရရဲ့” ဆိုတာမျိုး၊ “ဒီလို အကြွေးတွေဝိုင်းနေတဲ့အဖြစ်မျိုး ငါမဆွဲဆောင်ခဲ့ပါဘူး” ဆိုတာမျိုး ခင်များကတော့ မဆိုင်းမတွ ပြောတော့မှာပဲ။ နားနဲ့မနာ ဖ၀ါးနဲ့နာပါ။ “အဲဒီအရာတွေကို ခင်များ တကယ်ပဲ ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ် ”။
ဒါဟာ ခင်များ လက်ခံဖို့ အခဲယဉ်းဆုံး အယူအဆတွေထဲမှာ တစ်ခု အ၀င်အပါပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအယူအဆကို ခင်များ လက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း ခင်များဘ၀ အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းပါပဲ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 6:28 PM5comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 11:52 AM 1 comments
ဘုရင့် ဘဏ္ဏာ မတော်မတရား
ကံကြမာက စီရင်ခဲ့ပြီးသားလေ ။
သခင်ရယ် . . . . .
(၂၀၀၀-၂၀၀၁)လောက်ဆီက ရေးခဲ့ဘူးသော ကဗျာလေးပါ။ စာအုပ်ပုံထဲမှာ ပြန်တွေ့တာနဲ့တင်ထားလိုက်တာပါခင်ဗျာ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 9:51 AM5comments
● ပထမဦးဆုံး ပုံနှိပ်ဖော်ပြခံရသည့် ကဗျာ ဟု အမှတ်ရပါသည်။
အခြား ကလောင်အမည်ဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 11:00 PM2comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 10:30 PM 1 comments
ရာစုတွေလည်းပြောင်းခဲ့ပြီ . . .
တန်ဖိုးတွေလည်း မြင့်တက်လာခဲ့ပြီ . . .
မေတ္တာတရားတွေ စီးမျောနေတာတွေ့တယ် . . .
ချစ်ခြင်းတရားရဲ့ အနံ့တွေမွှေးပျံ့လာတယ် . . .
ဘ၀ကို ငါစတေးပါရစေ . . .
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက နယုန်မိုး at 11:58 PM3comments
အသင် ဘာဖြစ်သွားမည်နည်း။ ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 11:32 PM0comments
ကဗျာတွေကို အဖတ်များလာတော့ ကျွန်တော်လည်း ကဗျာတဒ်ပုဒ်လောက် ရေးကြည့်ချင်လာတာ။ ဒီခံစားချက်တွေကို အသွင်ပြောင်းဖို့ တခဏတော့ ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ အတွေးချဲ့ပြီး ချစ်သူရဲ့စကားတွေကို ခံစားလိုက်ရသေးတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ဆုတောင်းနေရဆဲပါပဲဗျာ။ ဖတ်လို့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ဖျစ်ညှစ်ခံစားလိုက်ရကျိုး နပ်လေရဲ့လို့ တွေးမိကြောင်းပါ….. …။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 1:04 PM6comments
ပန်းခြွေမုဆိုး မဟုတ်ပါ။ ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 11:56 AM2comments
မှားမှာလည်းစိုးတယ် ။ ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 9:42 PM2comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 5:22 PM 1 comments
ဓား ထက် ထက်တယ်။ ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 11:26 AM2comments
ဘာတစ်ခုမျှ စွတ်စွတ်စိုစို မရှိဘူး။
ထိုမြို့ကလေးဍ္ဍ် နေခဲ့သည်။ ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 6:33 PM2comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 4:38 PM0comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 10:15 PM 1 comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 9:46 PM 1 comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက နယုန်မိုး at 4:57 PM2comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် နယုန်မိုး, အရောင်စုံ အတွေးများ . . . . .
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မယ် at 2:26 PM5comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 1:35 PM3comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 5:31 PM9comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက နယုန်မိုး at 10:36 PM2comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 3:46 PM4comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက အိမ်လွမ်းသူ(မှန်နီကုန်း) at 9:14 PM3comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက နယုန်မိုး at 9:57 PM3comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက နယုန်မိုး at 9:49 PM4comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက နယုန်မိုး at 12:10 PM0comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက အိမ်လွမ်းသူ(မှန်နီကုန်း) at 11:42 PM9comments
သူ. ငါ. ညှိလည်း မသိလျော့ကာ
ထိန်မြဲသာတည့် . . . ။
တာတူးတို့ ငယ်သူချင်းအားလုံး ဆရာကန်တော့ပွဲ လုပ်ကြဖို့ တိုင်ပင်ကြရင်းနဲ့ တာတူးတို့ကို ပညာသင်ကြားပေးခဲ့သော ဆရာ၊ဆရာမ များကို သတိရတာနဲ့ တာတူး ၅ တန်းတုံးက သင်အံ့ခဲ့ဘူးတဲ့ ဒီ "ဆီမီးတိုင်"ကဗျာလေးကို ရေးတင်လိုက်တာပါ။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ဂုဏ်ပြုရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ တာတူးတို့ ၅ တန်း မြန်မာစာ ဖတ်စာအုပ်ထဲကပါ။ကဗျာရေးသားသူကိုတော့ တာတူး မေ့နေလို့ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။ သိရင်လည်း ပြောပေးကြပါ။ ကျေးဇူးတင်လျက်ပါ။
ဆရာ၊ ဆရာမ အပေါင်းကို လက်ဆယ်ဖြာ ထိပ်မှာမိုးလျက်
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 10:16 AM 8 comments
ဟိုဟို ဒီဒီမှ တွေ့ရာများကို ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဟာသတွေကို ဖတ်ရင်း တစ်ချက်လောက်လေး မတော်တဆပြုံးသွားရင်ကို ၀မ်းသာလှပါပြီ။
ငါက ဒီလို ဒီလို
အမျိုးသမီး သုံးယောက် စကားဝိုင်းဖွဲ့နေကြလေသည်။
ပထမအမျိုးသမီး - ငါ့ယောက်ျားက ကာလာတီဗွီဝယ်ပေးတယ် စပီကာတွေကလည်း သိပ်ကောင်းတော့ အသံတွေလည်း ကြည်နေတာပဲ၊ သိပ်ကောင်းတယ်။ အပြင်လည်း သွားစရာမလိုတော့ဘူး၊ အိမ်မှာထိုင်ပြီး ကြည့်ယုံပဲ။
ဒုတိယအမျိုးသမီး - ငါ့ကျတော့ ငါ့ယောက်ျားက ဗွီဒီယိုပြစက်ဝယ်ပေးတာ။ အခွေတွေထိုင်ကြည့်နေယုံပဲ။ နင့်ကိုရော ဘာတွေဝယ်ပေးလဲ။ - ဟု ပြောကာ တတိယအမျိုးသမီးအားမေးလိုက်လေသည်။
တတိယအမျိုးသမီး - ငါ့ယောက်ျားက ငါ့ကို ဘာမှ ၀ယ်မပေးဘူး။ ငါနဲ့တွဲပြီး အပြင်ထွက် ရုပ်ရှင်တွေ ပြဇာတ်တွေ သွားကြည့်လို့ရသေးတယ်တဲ့။
ယောက်ျားသည် ညမိုးချုပ်အိမ်သို့နောက်ကျပြန်လာပြီး မိန်းမအားပြောလေသည်
- မင်းကလေ ငါဘယ်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှလည်း မခန့်မှန်းဘူး။
- ခန့်မှန်းမှာပါ၊ ပထမဆုံး ရှင့် ဗားရှင်(version)လေး အရင်ပြောပါဦး။
အကယ်၍ သင်သည် နိုးစက်နာရီအနီးတွင် ကြွက်ထောင်ချောက်ကို ထားပါက သင် အလုပ်သို့ အချိန်မှီရောက်ရန်အတွက် အိပ်ယာမှ စောစောထရန် လွယ်ကူပေလိမ့်မည်။
သောက်ဖွယ်မပါသော ပွဲတော်သည် ဓာတ်ပုံကပ်မထားသော မှတ်ပုံတင်နှင့်တူ၏။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 6:32 AM7comments